Prof. U Nay Win – Healthy Life Journal
Prof. U Nay Win
Posts By Prof. U Nay Win
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. အများအားဖြင့် ခြေစွယ်ငုပ်တာက အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လက်သည်းတွေမှာလည်း လက်စွယ်ငုပ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လက်စွယ်ငုပ်တာနဲ့ ခြေစွယ်ငုပ်တာမျိုး မဖြစ်အောင်...
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. ကျွန်မက ၀ပါတယ်။ ဆေးစစ်လိုက်တော့ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရော များနေတဲ့အတွက် ဆေးတွေ သောက်နေရပါတယ်။ နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ၀လာတဲ့အတွက် အတက်အဆင်းလုပ်တဲ့အခါတွေမှာ ဒူးနာတာ၊ ခြေဖနောင့်နာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆရာ။...
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အဆစ်တွင်းသွေးဝင်ခြင်း (Haemarthrosis) အကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. Haem ဆိုတာ သွေးကိုဆိုလိုပြီး Arthrosis ဆိုတာ အဆစ်ရောင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ Haemarthrosis ဆိုတော့...
အတက်စာတွေစားမိရင် အကြောတက်တယ် . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကျွန်မအမေက အတက်စာတွေ စားမိရင် အရမ်းအကြောတက်တတ်ပါတယ်။ အကြောတက်တိုင်းလည်း ဆေးမသောက်ပါဘူး။ အကြောမတက်အောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်၊ အနေအထိုင်တွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဘယ်အစားအသောက်တွေက အကြောပိုတက်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ HA(FB)...
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ လူအများစုက ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုမစိုက်ကြတာ များပါတယ်။ ခါးကို ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ အလုပ်တွေလုပ်တယ်၊ ခါးကိုဒဏ်ဖြစ်စေမယ့် အလုပ်တွေကို လုပ်တယ်၊...